China AISI52100 Bearing / chrome steel ball Mpanamboatra sy mpamatsy | Kangda
Endri-javatra vokatras: mitondra baolina vy dia manana hamafisana, avo lenta, mitafy fanoherana ary fiainana maharitra.
Fonosana menaka, vy feritika, andriamby;
1. Baolina vy mitondra avo lenta dia be mpampiasa amin'ny fivorian'ny fitondra mangina haingam-pandeha, ny faritra misy ny fiara, ny faritra moto, ny faritra bisikileta, ny faritra misy ny fitaovana, ny sary mivalona, ​​ny lalamby, ny baolina eran-tany, ny indostrian'ny elektronika sns.
2.Baolina vy mitondra marin-toerana azo ampiasaina ho fampitaovana fikolokoloana sy fanaovana poloney;
Anaran'ny vokatra: Mitondra baolina vy / baolina vy Chrome / baolina vy ho an'ny fiterahana
Fangaro simika an'ny AISI52100 mitondra baolina vy（GCr15 / SUJ2 / 100Cr6）
Mn 0.25% -0,45%
P 0,025% max.
S 0,025% max.
Cr 1,35% –1.65%
de 0,03% Max
Ny vy mitondra dia manana hamafin'ny tanjaka, tanjaka mahery, mifandraika amin'ny tanjaky ny havizanana ary mitafy fanoherana, ary henjana be, izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanoherana ny harafoana sy ny fanoherana ny hafanana avo lenta amin'ny fepetra sasany.
Ny vy misy chrome chromium avo lenta dia misy atiny karbôna avo (0.95-1.05%), henjana avo lenta sy mitovy no azo aorian'ny famonoana olona, ​​ary fiainana maharitra harerahana. Ny fatiantoka dia ny fanoherana kely ny enta-mavesatra sy ny hamafin'ny fiantraikany.
Ny vy misy chrome chromium avo lenta dia ampiasaina matetika ho peratra sy singa mihodina amin'ny bearings eo ambanin'ny fepetra fampiasana ankapobeny.
Ny fitondrana baolina vy, amin'ny maha-ampahany manan-danja azy, dia mitana andraikitra lehibe.
Noho izany, ny fiasa ampiasaina sy ny fiainam-panompoan'ny fiterahana dia mifandray akaiky amin'ny fahamendrehana sy ny hamafin'ilay baolina vy mitondra. Ny hamafin'ilay baolina vy mitondra dia mifandraika amin'ny lanjan'ny enta-mavesatry ny baolina vy.
TANINDRAZANA Malagasy ANARANA MATERIAL
CHINE GB GCr15
Ny endri-javatra lehibe indrindra amin'ny baolina vy miteraka dia ny hamafiny sy ny fanoherana entiny. Avy eo isika dia mila miharihary matetika amin'ny lanjan'ny lanjan'ny vy vy. Ny habetsaky ny lanjan'ny hamafin'ny baolina vy vita dia voalaza ao amin'ny fenitra nasionalin'ny baolina vy GB / T 308.1-2013.
Aorian'ny fanasan-damba, fanosorana menaka ary alohan'ny famonosana ireo santionany baolina amin'ny andiany dia alefa ho an'ny fanaraha-maso farany hijerena ny fahamendrehana, ny fihodinana, ny hafanana, ny haben'ny habe ary ny hamafin'ny laboratoara be pitsiny, araka ny drafitra voafehy voafaritra sy ny fomba fanaraha-maso ny dock. Raha vantany vao feno ny fepetra takiana rehetra dia omena fanamarinana ho an'ny mpanjifa avy eo. Ny laboratoara misy anay dia manana milina sy fitaovana hajaina manerantany ary tantanan'ny mpiasa voaofana tsara sy mahay.
Teo aloha: Baolina fitaratra
Manaraka: AISI1015 Baolina vy
Aisi52100 mitondra baoritra vy
Aisi52100 G10 mitondra baoritra vy
G10 Aisi52100 mitondra baoritra vy